21st February 2021 | First Sunday of Lent (B) | PWorld Concept
21st February 2021 | First Sunday of Lent (B)
Ihe Ọgụgụ nke Mbụ (Jenesis 9:8-15)
Chineke gwara Noa na umu ya ndi ikom si, "Ana m ekwe unu nkwa, unu na umu unu, na anumanu ndi a nile so unu si n'ugbo ahụ pụta, anu ufe, anụ ulo na anu ohia ahụ niile, na agaghi m ekwekwa ka e jiri mmiri mebie ihe niile nwere ndụ n’uwa ozo. lhe m ji mesie nkwa a ike bu nke a; emeela m ka eke na egwurugwu m diri na mbara eluigwe, ka o bụrụ ihe iriba ama nye unu na ihe nile nwere ndụ bi n'uwa. Mgbe o bula m zitere igwe ojii n’uwa, aga m eme ka eke na egwurugwu soro ya pụta ihe. Site n'uzo di otu a, aga m echeta nkwa mkwere unu na umu anumanu niile, na agaghi m ejikwa mmiri mebie ihe niile nwere ndu n'ụwa ozo.
Abụọma na Azịza (Abụọma 25:4-5ab. 6 and 7bc. 8-9 (Az. 10))
Azịza: Onyenweanyi, uzo Gi by ikwudosi ike na ihunanya maka ndi na-edebe ogbugba ndu Gi.
1. Onyenweanyi, mee ka m mara uzo Gi. Onyenweanyi, kuziere m uzo Gi. Mee ka m na-aga n’eziokwu Gi. Kuziere m, n’ihi na Gi bu Chineke Onye Nzoputa m.
2. Onyenweanyi, cheta ebere Gi. Chetakwa ihụnanya ahụ ejiri mara Gi site na mgbe ochie. Onyenweanyi, were ihi ihunanya Gi cheta m, n'ihi na I di mma.
3. Onyenweanyi di mma burukwa Onye ikpe nkwumoto. O na-egosi ndi mmehie uzo. O na-eduzi ndi umeala n’uzo ziri ezi; na-akuzikwara umu ogbenye uzo Ya.
Ihe Ọgụgu nke Abụọ (1 Pita 3:18-22)
Obu ihe a kpatara Kristi jiri were otu inwu onwu maka njo nwuchitere mmadu niile onwu. Onye ezi omume nwuchiteere ndi ajo omume onwu, iji durute mmadu n'ihu Chineke. Onwu ahụ o nwurụ bu onwu a nwụrụ n'anuahụ, ma e nyere Ya ndu nke ime mmuo. O bụkwa n’ime mmuo a ka o gara kwusaara ndi mmuo e ji na mkporo okwu Chineke. Umu mmuo ndi a bụ ndi juru ikwere na Chineke n'oge gara aga, mgbe Chineke jiri ndidi chere ka Noa ruo ugbo mmiri e ji zoputa mmadu asato n'uju mmiri. Mmiri ahụ bụkwa ihe e ji atunyere mmiri nke mmirichukwu, nke na-abụghị ihe e ji asachapu inyi nke elu ahụ, kama o bu nkwa e jiri ezigbo ako na uche kwee Chineke site na mbilite n'onwu nke Jesu Kristi, Onye rogoro n'eluigwe wee nodu Naka nri Chineke; ebe o no na-achi ndi Mmuo ozi niile, na ndi niile na-achị achị na ike niile di n’eluigwe.
Mbeku (Matiu 4:4b)
Onyenweanyi Jesu, otito na ebube dịrị Gị.
Obụghi so na nri ka mmadu ji adi ndu, kama o bụ n'okwu o bụla si n'onu Chineke pụta.
Oziọma (Mak 1:12-15)
Mmuo Nso wee duru Jesu banye n'ozara. O noro n’ozara iri ubochi ano. Ekwensu nwara Ya onwunwa. Ya na umu anu ohia bikwa. Ndi Mmuo ozi biakwara nyere ya aka. Ma mgbe a tụnyesiri Jon n'ulo mkporo, Jesu biara na Galili, na-ekwusa Ozioma Chineke, na-asi: "Oge ezuola, ochịchi Chineke adila nso; chegharianu kwerenu n'Ozioma.
Oziọma nke Osebụrụwa.
Next22nd February 2021 | The Chair of St Peter, Ap. (Feast)